Nutrition – Page 13 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နှုန်း မြင့်မားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင် အဆုတ်ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာနဲ့ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းက မြင့်မားလာနေပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါက အသက် ၄၀ အထက်မှာ...
ဆံပင်သား အမျိုးအစားအလိုက် စားသင့်သည့် အစားအသောက်များ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆံပင်သားရဲ့ ပင်ကို အရည်အသွေးနဲ့ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး စားပေးသင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ – ပုံမှန်ဆံကေသာရှိသူတို့အတွက် ပုံမှန်ဆံကေသာပိုင်ရှင်တွေကတော့ အစားအသောက်ကို အထူးရှောင်စရာ မလိုပေမယ့် ဆံပင်သား မပျက်စီးအောင် အထူးစားသင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ရှိပါတယ်။...
တရုတ်နံနံစားရင် ဘယ်လိုကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးရရှိနိုင်သလဲ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တရုတ်နံနံကို ရှေးကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားခဲ့တာကြောင့် သက်တမ်းရင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးလို့ ဆို နိုင်ပါတယ်။ တရုတ်နံနံရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေး ဇူးတွေကို တိတိကျကျသိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ်။ (၁) တရုတ်နံနံမှာ ဗီတာမင်စီပမာဏများစွာ ပါဝင်တာကြောင့်...
မီးတွင်းမှာ စားသင့်၊ ရှောင်သင့်တာတွေ . .
မေး။ ။ ကလေးမွေးပြီး ဘယ်လို အစားအသောက်တွေကို ဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ လွင်မာ (FB) ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ကလေးမွေးပြီး သွေးနုသားနုအချိန်မှာ အစာအာဟာရပြည့်ဝဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာ အယူအဆတွေက ကလေးမွေးပြီးပြီ၊...
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စားသင့်သည့် အကြောင်းပြချက် လေးရပ်
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းက ဂေါ်ဖီထုပ် မျိုးနွှယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေပါတယ်။ (၁) ရောင်ရမ်းမှုကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်ပါတယ် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှာ ရောင်ရမ်းမှုကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှာ ကေအမ်ဖရောဆိုတဲ့ ဖလေဗနွိုက်တစ်မျိုး ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရောင်ရမ်းမှုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကို အားကောင်းစေပါတယ်။...
အုတ်ဂျုံကွေကာ (Oatmeal ) စားသင့်တဲ့အကြောင်းရင်း
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြာပေးပါသည်။ မေး ။ ။ အခုနောက်ပိုင်း Oatmeal ဆိုပြီး စားခိုင်းကြတယ်။ စီးတီးမတ်တွေမှာလည်း တွေ့ပါတယ်။ ဂျုံကြမ်းအဖတ်တွေလိုမျိုး၊ အဲဒါက ဘယ်လို ကောင်းကျိုးများရှိပါသလဲ။ ကျွန်မအဖေကို မနက်စာအနေနဲ့ကျွေးချင်လို့ပါ။ သဲသဲ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့။ ဖြေ...
မိခင်နို့ သိပ်မထွက်လို့ ဘယ်လို စားသောက်သင့်သလဲ . .
မေး။ ။ မင်္ဂလာပါ။ ကလေးမွေးပြီးတာ တစ်ပတ်ရှိပါပြီ။မိခင်က နို့သိပ်ပြီးမထွက်လို့ ဘယ်အစားအသောက် တွေ စားခိုင်းရမလဲ။ သိချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Zaw Myo Aung (FB) ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။ ကလေးမွေးပြီးခါစ...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဆီးချိုရောဂါ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိ တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးအတွင်းမှာရှိတဲ့ အချိုဓာတ်ကို ထိန်းနိုင်ဖို့ အောက်ပါအတိုင်း နေထိုင်စားသောက်သင့်ပါတယ်။ (၁) လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ ဆီးချိုရောဂါတို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မနက် ၃၀ မိနစ်၊ ညနေ...
နာနတ်သီးစားရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရမှာလဲ …
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နာနတ်သီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ရေပန်းအစားဆုံးသစ်သီးတွေထဲမှာ တစ်မျိုးအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ချိုတယ်၊ အရည်ရွှမ်းတယ်၊ အရသာရှိတယ်. .စတဲ့အာနိသင်တွေရှိတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးအာဟာရဓာတ်လည်း ပြည့်ဝပါတယ်။ (၁) ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ အပြည့်ပါဝင်ပါတယ် နာနတ်သီးမှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီ၊ကယ်လ်စီယမ်၊ ဖောစ့်ဖရပ်စ်နဲ့...
နှလုံးကျန်းမာဖို့ ဘာစားပေးရမလဲ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နှလုံးဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးကျန်းမာဖို့အတွက် အောက်ပါအစားစာတွေကို စားပေးရပါမယ်။ – ဆီ သံလွင်ဆီမှာ ကောင်းတဲ့အဆီပါဝင်မှု မြင့်မားပါတယ်။ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် နှလုံးသွေးလွှတ်ကြော မပိတ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာပါတဲ့...